Ahoana ny fikarohana ny Hashtags tsara indrindra | Martech Zone
Ahoana ny fikarohana ny Hashtags tsara indrindra
Alahady, Desambra 20, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Hashtags dia niaraka taminay nanomboka teo ny fandefasana azy ireo 8 taona lasa izay ao amin'ny Twitter. Iray amin'ireo antony nahatonga antsika hivoatra a Shortcode Ny plugin dia ny fampitomboana ny fahitana antsika ao amin'ny Twitter. Ny singa iray lehibe amin'izany dia ny fahafahana manampy tenifototra ao anaty ny kaody fohy. Nahoana? Raha tsorina, maro ny olona mikaroka Twitter amin'ny fototra mitohy mifototra amin'ireo tenifototra nozaraina. Toy ny teny fanalahidy fa ilaina amin'ny fikarohana, ny tenifototra dia manakiana ihany koa amin'ny media sosialy.
Iray amin'ireo lahatsoratray malaza indrindra ny anay lisitry ny fitaovana fikarohana tenifototra misy amin'ny Internet. Fa ahoana no ampiasan'ny mpivarotra iray amin'ireo fitaovana ireo hahalalana ireo tenifototra tsara indrindra azo atao mba hampitomboana ny fahitana ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy.
Ny antony mahatonga ny diezy malaza dia satria avelan'izy ireo ho hitan'ny mpihaino misimisy kokoa izay mety mbola tsy mifandray aminao. Zava-dehibe ny mahatakatra fa noforonina ho serivisy izy ireo, fomba iray hanafohezana ny fomba fiasa raha te hahita lahatsoratra bebe kokoa momba ny lohahevitra tianao ianao.
Ity ohatra avy amin'ny Salesforce ity dia mampiasa fitaovana maro.
On Tagboard, ny tolo-kevitra dia ny hijerena ireo antontan'isa, fahatsapana ary tenifototra mifandraika amin'ny sehatra media sosialy marobe. Ny tanjonao dia ny mamantatra ny malaza indrindra izay misy ifandraisany indrindra amin'ny lohahevitr'ilay fanavaozana ny haino aman-jery sosialy na lahatsoratra tianao horesahina.
On Twitter, azonao atao ny mampiasa ny fampiasa fikarohana be dia be. Mikaroha teny ao anaty boaty fikarohana ary azonao atao ny manenjana ny valiny amin'ny alàlan'ny kiheba maromaro - ambony (sary sy bitsika), mivantana, kaonty, sary ary horonan-tsary. Azonao atao ny manivana ny fikarohana manerana ny Twitter na ao anatin'ny tamba-jotra misy anao ihany. Azonao atao koa ny mitady ny manodidina anao ara-jeografika fotsiny.
On Instagram, mila manoroka tenifototra fotsiny ianao ary ny Instagram dia hanome soso-kevitra avy hatrany ireo tag malaza miaraka amin'ny isa isa'izy ireo. Ampio ireo tenifototra izay misy ifandraisany ary isa marim-pototra.
Na dia mametra ny toetranao ankapobeny zaraina amin'ny fanavaozana anao aza ny Twitter, ao anatin'izany ny tenifototra, Instagram mamela anao hizara tenifototra 11 isaky ny sary na horonan-tsary zaraina!
Ity ny tendroniko… be miovaova! Alao an-tsaina ny mpampiasa iray mikaroka tenifototra izay soratanao miaraka amin'ny kaonty media sosialy am-polony hafa. Ankehitriny, alaivo an-tsaina ny mpampiasa iray mikaroka tenifototra ary mahita atiny vaovao sy fanavaozana novokarinao. Iza amin'ireo araka ny eritreritrao no manome anao fotoana tsara kokoa hanarahana azy, hananganana fahatsiarovan-tena, hirotsaka amin'ilay kaonty, na amin'ny farany hanaovana orinasa.
Alao an-tsaina ny mpampiasa iray mikaroka tenifototra izay soratanao miaraka amin'ny kaonty media sosialy am-polony hafa. Ankehitriny, alaivo an-tsaina ny mpampiasa iray mikaroka tenifototra ary mahita atiny vaovao sy fanavaozana novokarinao. Iza amin'ireo araka ny eritreritrao no manome anao fotoana tsara kokoa hanarahana azy, hananganana fahatsiarovan-tena, hirotsaka amin'ilay kaonty, na amin'ny farany hanaovana orinasa.
Tags: tenifototra tsara indrindramifidy tenifototrafikarohana hashtagahoana noInstagramKelsey Jonessalesforce kanadatagboardTwitter
Dec 21, 2015 amin'ny 7: 06 AM
Misaotra amin'ny fampahalalana, Douglas. Te-hanampy ny traikefako amin'ny fampiasana tenifototra aho.
– Instagram. Diso fanantenana ny olona mampiasa azy ireo amin'ny spam sy votoaty tsy mendrika. Ohatra, ny #sea dia tsy mampiseho afa-tsy sary 4 mifandraika amin'ny ranomasina ary ny hafa amin'ny zavatra hafa fa tsy ranomasina.
– Twitter. Tsara kokoa ny toe-javatra, saingy mbola tsy dia tsara. Ny hany tiako holazaina dia ny fitaovana sarobidy misy tenifototra mifanaraka amin'izany dia manolotra very amin'ny tabataba. Noho izany, mba hisarihana ny saina amin'izany dia mila mampiasa zavatra hafa ianao, toy ny sary mahafinaritra na manonona olona amin'ny famaritana
21 Desambra 2015 à 12:55
Hevitra lehibe, Alex. Mahasorena tanteraka rehefa araraotina. Angamba izy ireo dia hanampy rafitra mitatitra amin'ny ho avy izay ahafahan'ny spammers amin'ny tenifototra ho tratra ary hofafana ny kaontiny.